डेलको ल्याप्टप किन्ने हो? यस्ता छन् फिचर्स र मूल्य
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौँ, साउन १३
अध्ययन गर्ने विधार्थी हुन् वा कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी दुबैका लागि नभई नहुने इलेक्ट्रोनिक्स साधन हो ल्यापटप। बजारमा विभिन्न कम्पनीका फरक फिचर्स तथा मूल्यका ल्यापटपहरु उपलब्ध छन्।
ल्यापटप खरिद गर्नपूर्व आफूले कुन प्रयोजनका लागि किन्न लागेको हो भन्ने कुराले कस्ता फिचर्स र मूल्यका ल्यापटप किन्ने भन्ने निर्धारण गर्ने गर्छ। जस्तो तपाईले कार्यालयमा बसेर सम्पूर्ण काम चाँडो सक्नु पर्छ भने स्ट्रङ प्रोसेसर तथा र्याम साइज ठूलो भएको ल्यापटप आवश्यक पर्छ।
तर तपाई ल्यापटप लिएर हिडी रहनुपर्ने खालको काम गर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता ब्याट्री व्याक अपलाई दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै ल्यापटप किन्नुभन्दा पहिले त्यसमा समावेश गरिएका सिपियु प्रोसेसर, स्टोरेज क्षमता, विन्डोज तथा ब्याट्री ब्याकपमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सम्वन्धित व्यापारीहरु सुझाउँछन्। ल्यापटप विक्रेता सागर पोखरेल ल्यापटप किन्दा चाहिएको स्क्रिन साइज, हार्ड डिस्क, र्यामजस्ता कुराहरु निकै महत्वपूर्ण रहने बताउँछन्।
कतिपयले सुरुमा सस्तो पाएको भन्दै किन्ने तर पछि विभिन्न प्रोग्राम तथा सफट्वेयर थप्दै जाँदा पुनः स्तरीय किन्न आउने गरेको उनले बताए। ‘एक पटक किनिसकेको ल्यापटपले धेरै समयसम्म काम गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्य राख्नुपर्छ, जतन गरेर चलाउने हो भने एउटै ल्यापटपमा वर्षौ काम गर्न सकिन्छ’ पोखरेलले भने।
बजारमा विभिन्न ब्राण्डका ल्यापटप फरक फरक मूल्यमा पाइने गर्दछ। तर यी सबै ब्राण्डेड नै हुन्छ भन्ने पनि होइन्। व्यापारीहरुका अनुसार वजारमा सस्ता तथा कम गुणस्तर भएका, डुप्लिकेट तथा ग्रे मार्केट हुँदै आयात गरिएका ल्यापटप समेत पाइने गर्छ।
यस्तोमा ‘डेल’ ब्राण्ड तपाईको रोजाईमा पर्न सक्छ। अमेरिकी डेक्सटप, ल्यापटप, पिसी, मनिटर, गेमिङ तथा एक्सेसरिज उत्पादक कम्पनी डेल विश्वको रुचाइएको ब्राण्ड हो।
नेपालमा पनि डेलका ल्यापटप सबैभन्दा धेरै विक्री हुने मध्येको एक ब्राण्ड हो। न्योटेरीक नेपाल प्रालि डेलका उत्पादन विक्री गर्ने आधिकारिक विक्रेता रहँदै आएको छ।न्योटेरीक नेपालल आफै.ले सञ्चालन गर्ने ‘न्यो स्टोर’ की ऋतु मर्हजनका अनुसार स्टोरबाट ल्यापटप खरिद गर्दा ल्यापटपमा एक देखि २ वर्षसम्मको वारेन्टी, ब्याट्री तथा चार्जरमा एक वर्षको ग्यारेन्टी तथा एक वर्षसम्मको बिमाको सुविधा समेत प्रदान गरिन्छ।
न्यो स्टोरमान हाल ५५ हजारदेखि १ लाख २० हजारसम्मका ल्यापटप उपलब्ध छन्। तर बजारमा भने यी भन्दा फरक मूल्यका समेत पाइन्छन्।
कस्ता छन् त आधिकारिक वितरक ‘न्यो’ मा पाइने ल्यापटप ? कति तोकिएको छ त मूल्य ?
डेल इन्सपिरन् ७५६६
इन्टेल कोर i5 प्रोसेसर, ४ जीबी र्याम, १ टीबी हार्ड ड्राइभ, १५ इन्च डिस्प्ले, विन्डोज १०, रेड कलरमा उपलब्ध
डेल इन्सपिरन् ५५६७
इन्टेल कोर i5 ४ जीबी र्याम, ५०० जीबी हार्ड ड्राइभ, १५ इन्च डिस्प्ले, विन्डोज १०, ४ सेल ब्याट्री, ब्लयाक, ग्रे, ब्लु कलरमा उपलब्ध
इन्टेल कोर i5, ८ जीबी र्याम, १ टीबी हार्ड ड्राइभ, १५ इन्च डिस्प्ले, विन्डोज १०, ४ जीबी एमडी ग्राफिक्स, ४ सेल ब्याट्री, ब्लयाक, ग्रे, ब्लु कलरमा उपलब्ध
इन्टेल कोर i7 ४ जीबी र्याम, १ टीबी हार्ड ड्राइभ, २ जीबी एमडी ग्राफिक्स, १४ इन्च डिस्प्ले, विन्डोज १०, ४ सेल ब्याट्री, ब्लयाक र सिल्भर कलरमा उपलब्ध
डेल इन्सपिरन् ५४६८
इन्टेल कोर i7, ४ जीबी र्याम, १ टीबी हार्ड ड्राइभ, २ जीबी एमडी ग्राफिक्स, १४ इन्च डिस्प्ले, विन्डोज १०, ४ सेल ब्याट्री, ब्लयाक कलरमा उपलब्ध
इन्टेल कोर i5, ४ जीबी र्याम, ५०० जीबी हार्ड ड्राइभ, २ जीबी एमडी ग्राफिक्स, १४ इन्च डिस्प्ले, विन्डोज १०, ४ सेल ब्याट्री, ब्लयाक र सिल्भर कलरमा उपलब्ध
डेल इन्सपिरन् ५४५९
इन्टेल कोर i5, ४ जीबी र्याम, ५०० जीबी हार्ड ड्राइभ, २ जीबी एमडी ग्राफिक्स, १४ इन्च डिस्प्ले, विन्डोज १०, ४ सेल ब्याट्री, ब्लयाक कलरमा उपलब्ध
डेल ल्याटिच्युड ३४५०
इन्टेल कोर i5, ४ जीबी र्याम, ५०० जीबी हार्ड ड्राइभ, इन्टेल एचडी ग्राफिक्स, १४ इन्च डिस्प्ले, विन्डोज ८, ३­सेल ब्याट्री, ब्लयाक कलरमा उपलब्ध
डेल इन्सपिरन् ३५२१
इन्टेल कोर i5, ४ जीबी र्याम, ७५० जीबी हार्ड ड्राइभ, २ जीबी एमडी ग्राफिक्स, १५.६ इन्च डिस्प्ले, ६­सेल ब्याट्री, ब्लयाक कलरमा उपलब्ध
डेल इन्सपिरन् ५४३७
इन्टेल कोर i3, ४ जीबी र्याम, ५०० जीबी हार्ड ड्राइभ, १ जीबी एमडी ग्राफिक्स, १४ इन्च डिस्प्ले, ६­सेल ब्याट्री, सिल्भर कलरमा उपलब्ध
डेल इन्सपिरन् ३४२१
इन्टेल कोर i3, ४ जीबी र्याम, ७५० जीबी हार्ड ड्राइभ, १ जीबी एमडी ग्राफिक्स, १४ इन्च डिस्प्ले, ४­सेल ब्याट्री, ब्ल्याक कलरमा उपलब्ध
इन्टेल कोर i5, ४ जीबी र्याम, ५०० जीबी हार्ड ड्राइभ, १ जीबी एमडी ग्राफिक्स, १४ इन्च डिस्प्ले, ६­सेल ब्याट्री, ब्ल्याक कलरमा उपलब्ध
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन १४, २०७४, ०१:४७:२६